Cordillera de los Andes: njirimara, mmalite, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime usoro usoro ugwu kacha mara amara n'ụwa Ugwu Andes. Ọ dị na South America na-atụle ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ugwu nso na nke abụọ kasị elu n'ụwa mgbe Himalaya. Ebe e si nweta aha ugwu a edochabeghị anya ebe ọ bụ na o nwere ike ịbụ na ọ bilitere site n'ọtụtụ ụzọ. Otu ihe puru ime bu na andes sitere n'okwu a mgbochi site na Quechua ihe pụtara "eweli akara". Ndị ọzọ na-eche na ọ na - enweta aha Antisuyo nke bụ otu n'ime mpaghara 4 nke alaeze Inca.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile nke ugwu ugwu Andes na mkpa ọ nwere dị ka ụdị ihe dị iche iche dị iche iche dị na mmiri si dị.
2 Kasị elu
3 Nkewa ugwu ugwu
4 Mmalite nke ugwu ugwu
Ọ bụ ugwu ugwu nke ya na ụsọ oké osimiri dị ma nọrọ na mpaghara nwere oke ala na ugwu na-arụ ọrụ. Ọrụ ala a na ugwu mgbawa na - akpata ya nwere enweghị nsogbu ala yana inwe oke elu dị otú ahụ. Ọ dị na Pacific Ring of Fire. Ọ bụ ezie na o nwere nkwarụ ndị a, n'ihi nnukwu mgbatị ya, ọ nwere ikuku oxygen kachasị dị ala n'ihi ogo ya. N'agbanyeghị nke a o nwere ọtụtụ ụmụ amaala dị na mpaghara a niile dabara na enyemaka na ịdị elu.
Alaeze Inca bụ otu n'ime ndị ama ama ama biri na mbara ala Andes n'oge oge Hispanic. Obodo ya nke bu Machu Picchu di na ebe a kariri mita 2400 n’elu oke osimiri. Ogologo ugwu a dum dị ihe dịka puku kilomita asaa. Ọ dị n’agbata narị kilomita abụọ na narị asaa n’obosara, dabere n’ebe anyị nọ. Ugwu kachasị elu nke ugwu a nwere mita 200. Ogologo ya kachasị elu bụ Aconcagua.
Iji chọta ugwu a, anyị ga-aga mpaghara ọdịda anyanwụ nke South America ma ọ malitere site n'ụsọ Oké Osimiri Caribbean ruo n'ọnụ ọnụ ebe ndịda nke kọntinent ahụ. Ọ gafere mba 7 n'etiti anyị nwere Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru, Chile na Argentina.
A na-ahụ ọnụ ọgụgụ kasị elu na ugwu ugwu Andes na Peru, Argentina, na Ecuador. A na-ahụ ọnụ ọnụ ugwu ndị ọzọ dị ala n’ebe ugwu na n’ebe ndịda. Ugwu ugwu nwere otutu ugwu na ugwu mgbawa nke a maara nke ọma Aconcagua na ndị ọzọ dịka ndị a: Nevado Ojos del Salado, Huascarán, Chimborazo, Nevado del Ruiz, Galeras na Bonete.
Offọdụ n’ime ugwu na-agbọpụta ọkụ anyị nwere n’elu ụwa anyị dị n’elu ugwu a. Na ngụkọta, enwere ike ịgụta ya na ọ nwere ihe dịka 183 ugwu mgbawa na-arụ ọrụ. Ọnụnọ nke ala a na -eme mmiri na ugwu mgbawa pụtara na enwere ụfọdụ mmiri ọkụ na akụ ndị ọzọ nwere nnukwu akụ na ụba.
Nkewa ugwu ugwu
A na-ekekọta ngụkọta nke ugwu ahụ dum na ngalaba dum. Nke mbụ dị na mpaghara ugwu nke gụnyere akụkụ nke Venezuela na Colombia. A na-ewere akụkụ nke abụọ dị ka etiti Andes ma kwekọọ na obodo Bolivia, Peru na Ecuador. N'ikpeazụ, anyị nwere akụkụ nke atọ nke ugwu ugwu a na-akpọ n'ebe ndịda Andes ma kwekọọ na obodo Chile na Argentina.
Nkewa a na-eme ka e nwee ụdị ala nke ala n'etiti mba dị iche iche nke jikọrọ ugwu a. Ọ na-ejekwa ozi iji kewaa ụfọdụ mpaghara mpaghara n'etiti mba ndị ahụ. Ọ bụ ezie na ugwu ndị ahụ na-adịkarị n’ime mmiri na-ekpo ọkụ, e nwere ugwu ndị toro eto n’ihi ịdị elu ha ha na-ekpuchi snow maka ọtụtụ afọ ma, n'ihi ya, bụ ụlọ glaciers.
Igwe glaciers ndị a bụ ihe iyi egwu ịrị elu oke osimiri n'ihi okpomoku ụwa. Otutu mpaghara a nwere onodu ojoo, tumadi na mpaghara owuwa anyanwu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịga n'akụkụ ọdịda anyanwụ, ị ga-ahụ ọchịchị mmiri ozuzo ka ukwuu.
Ọ nwere oke ala dị egwu n'ihi ọrụ a na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Na mpaghara Andean anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ugwu dị larịị n'ebe dị elu ebe ụfọdụ n'ime obodo ndị kachasị mkpa na South America dị ka La Paz, na Quito na Bogotá. Ala a dị elu bụ nke abụọ kachasị ukwuu n'ụwa, ọ na-apụta n'etiti Bolivia na Peru na Ọ dị n’ebe dị elu karịa mita 3.600 n’elu elu osimiri.
Mmalite nke ugwu ugwu
Nke a gold na-akwa ákwá na-abịa site na tertiary oge nke Mesozoic. Ha dị n'elu mpaghara na-arụ ọrụ nke ọma na ala ọma jijiji na mgbawa ugwu mgbawa bụ ihe omume oge niile. Inwe ọrụ na-aga n'ihu na oge na-aga n'ihu yana inwe oke ọnụ, A na-ahụta ugwu a dị ka nwata.
A na-eche na nhazi ya sitere na nkewa nke Pangea na n'oge ndị dinosaurs, oke ọdọ ma ọ bụ oke osimiri dị n'ime mpaghara ahụ dum. Mgbe mmebi nke Pangea gasịrị, efere tectonic na-aga n'ihu n'oge afọ niile nke oge Jurassic ruo, n'oge Ogechi, efere Nazca na efere Antarctic kwagara n'okpuru efere South America.
Mgbapu a nke efere kpalitere na okike mpaghara mpaghara nke mbadamba na efere ndị ahụ malitere ịmalite. Nke a mere ka enwee ike nke jikọtara eriri ahụ ma n'ihi ya enwere ala ọma jijiji nke mere ka eriri ahụ bulie elu ma meghee, mebe ugwu ndị ghọrọ ugwu. Ugwu ndị a ma na-arị elu maka otu narị afọ gara aga, Karịsịa na ọrụ ka ukwuu n'oge Cretaceous na Tertiary.
N’ịbụ ndị buru ibu, e nwere ọtụtụ ụdị ugwu na gburugburu ebe obibi. Inwe ugwu a niile enwere ọtụtụ osisi na ahịhịa dị iche iche. Enwere ndị ọgaranya nke naanị mmadụ ole na ole dị ndụ ga-ebi, mana ndị ọzọ fọdụrụ puku ụdị ndụ na-ebikọ ọnụ.
N'etiti anụmanụ kachasị pụta ìhè anyị na-ahụ Nnukwu awọ si n'Ọdọ Mmiri Titicaca, Andean cock-of-the-rocks, llamas, pumas, hummingbirds na opossums, n'etiti ndị ọzọ. Banyere ohia, oke ohia na oke ohia nke okpomoku. Ahịhịa dị ụkọ nke ukwuu ma enwere ahịhịa.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ugwu ugwu Andes.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Andes